MADAXWEYNE SHIRIIF OO AAD LOOGU SOO GAROONKA DIYARADAHA EE MOQDHISO | Toggaherer's Weblog
HADHAA FULKAANE KA QARXAY SAXARAHA DANAAKILA OO SOO LABA KACLAYNAYA MALINBA MALINTA KA DAMBAYSA
Moqdisho 27 March 2009 (THN)
Madaxweynaha Dowladda Midnimada Qaran Sheekh Shariif iyo wafdigii uu hoggaaminayay muddo ku dhow laba toddobaad booqashooyin ku kala bixinayay dalal ka tirsan Afrika ayaa manta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho.
Garoonka Diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde International Air Port waxaa Madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyay madax ka tirsan Golayaasha Dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa markii uu ka soo degay diyaaradii uu saarnaa waxa uu mid mid u gacan qaaday madaxda Dowladiisa ka tirsan ee iyagu ka qeyb galay soo dhoweyntiisa, wuxuuna Madaxweyne Shariif qolka martida hadal kooban ku siiyay Warbaahinta, isagoona sheegay in dalalkii uu booqashada ku tegay ay isla garteen sidii ay dowladdiisa cusub u garab istaagi lahaayeen.
Dhinaca kale imaatinka Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa ku soo beegmaya xili ay ka soo wareegtay muddo 24-saac ah markii qarax miino la doonayay in lagu khaarajiyo Wasiirkiisa arrimaha gudaha kana mid ah saaxibadiisii xilligii Maxkamadaha Islaamiga ah ay lixda bilood nabadda ku soo celiyay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka intiisa kale.
Waa markii ugu horeysay oo Madaxweyne Sheekh Shariif socdaal dibadeed ku tago dalka dibadiisa isagoo Madaxweyne ah, waxaana xukuumadiisa oo ay horyaalaan turunturooyin badan oo ay ugu weyn tahay sidii ay xal ugu heli lahayd kooxda Al-Shabaab oo iyadu ah tan ugu mayalka adag isla markaana liiska madow uga jirta kooxaha argagixisada caalamiga ah.